फेरी अर्को अध्यादेश ल्याउदै देउवा सरकार, पहिलो निशानामा एमाले ! – GALAXY
फेरी अर्को अध्यादेश ल्याउदै देउवा सरकार, पहिलो निशानामा एमाले !
काठमाडौँ- आन्तरिक किचलोका कारण एकपटक फुटिसकेको पार्टी नेकपा एमालेलाई थप फुटाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्को अध्यादेश ल्याउले या अन्य कुन प्रक्रियामा जाने बह्नेरा कानुनी परामर्श थालेको कुरा चर्चामा छ ।
एमालेमा विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि मध्यमार्गी भन्दै एमालेमै बसेका कतिपय नेताहरूलाई सहज हुनेगरी जुक्ती खोजी गरिएको बताइएको छ ।
त्यसमाथि पनि विशेष कारणले आयोगमा सनाखत गर्न नसकेका सांसदहरुलाई मध्यनजर गर्दै एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउने वा नयाँ कुनै प्रक्रियामा जाने भन्ने तयारी गरिएको हो ।
स्रोतका अनुसार हाल नेकपा एमालेमा रहेका केही नेताहरु एसमा जान खोजिरहेका छन् । तर कानूनी प्रावधानका कारण उनीहरुलाई सजिलै त्यहाँ जान सजिलो भने छैन ।
त्यसैले उनीहरुको सहजताका लागि सत्ता साझेदारका नेताहरुबीच अध्यादेश ल्याउने चर्चा चल्न थालेको हो । अध्यादेश आए नेकपा एमाले अझै फुट्नेछ । माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको आकार बढ्ने देखिएको छ ।